XOGTA Kenya oo Dulaankii ugu weyna Ku Qaday Soomaaliya Dhulkii ugu badnaa oo ay Gooosanayso - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
[ June 26, 2022 ] Plan posterieur cougar et voit femme mur	Cougar Life meetic site
HomeMaqal Iyo MuuqaalXOGTA Kenya oo Dulaankii ugu weyna Ku Qaday Soomaaliya Dhulkii ugu badnaa oo ay Gooosanayso
XOGTA Kenya oo Dulaankii ugu weyna Ku Qaday Soomaaliya Dhulkii ugu badnaa oo ay Gooosanayso
November 5, 2021 News Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 17
DAAWO XOGTA Cajiibka 4 Sababood oo Drone Turkiga Halis u yahiin Ana laga Hortagi Karin Ukrayn ee Ruushka
Video: Soomaaliya ‘oo gashay xaalad la mid ah tii lagu dilay’ madaxweyne Cabdirashiid
Waa shaki la’aan in Kenya badda Soomaaliyeed damac weyni ka hayo, laakiin anigu ma aaminsani in ay dhul Soomaali leedahay u hawoonayso. Marka jawiga siyaasadeed ee Afrikada haddeeran xaajada lagu saleeyona, Kenyada hadda jirta iyo tii Jomo Kenyatta laga dhaxlay waa kaaf-iyo-kaladheeri.
Runtu waxaa weeye in ay qaaradda madow si xawli iyo xawaar dheer leh uga xuubsiinayso siyaasaddii casrigii “qaadashadii xorriyadda” iyo falsafaddii ay kusaleysnayd intaba. Waagaas waxaa taagnayd xamaasad laga sinnaa oo ka alkumatay khibraddii xanuunka badnayd ee addoonsi iyo gumeysi shisheeye lagala kulmay salka kuhaysay, iminkase marxalad taas aad uga duwan ayay qaaraddu maraysaa oo siyaasadda kama mideysna oo kumana mideysna.
Sababta ugu weyn ee isbeddelkan xooggan dhalisay ayaa ah in ay Afrikaanku “xornimadii” kaddib iyaga dhexdooda isugeysteen xadgudubyo waaweyn oo reebay utumo iyo aanooyin kasii xanuun badan wixii shisheeyaha laga la kulmay, kuwaas oo aakhirkii qummaati u zuuliyay dareenkii awalkii hore la wadaagay ee dhibbanenimada gacmaha qalaad kusaleysnaa.
Sidaas aawadeed ayaa waxaa si kalsooni leh lagu qiri karaa in dareenkii Afrikaannimo ee markii hore la wadaagay uu haatan beddelay dareenka qabyaaladeed iyo qowmiyadeed oo aad usii xoogeysanaya, waxaana laga dheehan karaa colaadaha sokeeye ee waddamada Afrikaanka sii kala furfuraya teer iyo bartamihii iyo dabayaaqadii sagaashanaadkii.
Waqtigan xaadirka ahna, qowm iyo qabiil kalba waxaa u falsafad iyo qaddiyad noqotay iyaga isbedbaadintooda iyo gacan-kudhigidda kheyraadka degaannadooda ku duugan. Dareenkii qarannimo waxaa booskiisa galay dareenka quweynta qowmiyadeed iyo qabiileed, waxaana nadaamkii hore ee dawlad-wadaagnimada guud beddelaya nadaamka dawladnimada kusaleysan awood-iyo-saami-qaybsiga ee federaalka loogu magacdaray.
Marka xaaladdan cusub wax lagu saleeyo oo laguna qiimeeyo, majirto haddeer Kenya ay qabaa’ilkeedu iyo qowmiyadaheedu wadaagaan dareen “Kenyanimo” oo dhab ah ee dawladda Kenya usaamixi kara in ay Soomaaliya mise waddan kaleeto duullaan dhulboob ah ku qaaddo. Qolo waliba geyigeeda iyo kheyraadkeeda ay qolyaha kale ka ilaashanaysaa, waxayna wadaagaan oo keliya dawlad guud oo ay saamiley ka wada yihiin.
Jawiga siyaasadeed ee Itoobiyana aad ayuu usii adkeyn doonaa dhaqdhaqaaq ay Kenya iskudaydo in ay gobolladeeda NFD kasameyso oo dhulboob iyo wax lamid ah ku aaddan.
Geele Naanaab says:
Dadkan yaa looga dacwoodaa?
Gurigani ma laba madaxweyne ayuu yeeshay.
Waryaa.. WARYAA.., hee .. HEE, haah, bal wuxuu iigu jawaabayo eegaa hooyadiina way maqalaysaa. Ninkan guriga iiga saar oo meel ha kiraysto. Banaanka ha iiga baxo markaan iraahdo hooyadii ayaa guriga dib ugu soo xeraysa, amarkaygiina waa la jabiyay.
Naa gabaryahay magaranaysaa ninkan waxaan u ciqaabayo ama aan wax ugu sheegayo? Ma doonayo inuu noqdo nacas, waxan rabaa inuu umadiisa wax la qaybsado, nin wanaasgan noqdo oo dalkiisa iyo diintiisa iyo dadnimadiisa garto.
Mayee wiilka ha iiga qaylin… waa lix jir. Anigu lix bilood iyo lixdan sano waa isugu kay mid. Hadaan hadeer wax loo sheegin ama la tababarin goormuu wax fahmayaa. Dumarkani iyagaa sabab u ah caruurta halowgooda, waxaana la arki jiray dumar is barbar taagta odayga oo caruurta ku hanuunisa aaabuhu meesha uu u wado, balse waa la isla garan la’yahay, raggiina waxayba u bateen wax-ma-tare iyo nin hurdaysan oo hadba meeshii loo wado iska raaca.
YARYAA… aabo…, haduuba kasii daray, war aabo maxay tahay ma soomali aboow baAD TAHAY, sida afku uga halaabayo ayaa dhaqankuna uga halaabayaa. Maalinkaan lahaa naa ka daa magacaa aad u bixinayso oo carabiyaynta aanan garanayn meesha ay nooga timid, oo aan ku adkaystay magacyadii la yiqiinay reer Naanaab oodhan, anoo Geelle ah, aabahay oo warsame ah, iyo awoowgay oo WArdheere ah, maxaa noo diiday inaan dhaqankaga haysano.
Anigu yaabay, mar hadaan wax la’iska maqlayna waxaan filayaa in dhoobada la wada walaaqan doono.
Si kastood wanaag u doonayso, hadaan lagula garan waa hal bacad lagu lisayo. Ma jecli inaan ku maahmaaho af qalaad balse gaaladu waxay tiraahdaa ‘ the road to hell is paved with good intentions’ ama sida reer mudugu yiraahdaan ‘ walaale jidka naarka loo aado qodad iyo boholo maleh’ reer mudugu waad dadka ugu liita Soomaalida oo uguna doqonsan isuguna fiican islaweynaan darteed, reer Berberana waxay yiraahdaan dariiqa Berbera ka aada hargeysa waa dawaali, reer Xamarkuna waxay yiraahdaan ‘ Ceelgaab luuluuq ksato waa jiiro maafiyo’ ama reer barigu ay yiraahdaan ‘ Ari boowoow adduunkuna waa wada qarar, aakhirana naar baa jidha’, yaaya iyo inta fadaasee iyaguna waa dhiman yihiin.
Raali ka ahaada badanaaba dadka af qalaad ku maahmaaha waxaan iraahdaa miyaydaan afsoomali aqoon mise ajnabi baad imoodeen, markaasay qalijaan oo sheekada bedelaan.
Calaa kuli xaal anigu wax garan maayo inta hosku laalan yahay, raguna sida bakaylihii bay bur(god) daydaydaan intay mid ku jiraan@.
Mar hore ma sheegay in dad hurda aynu nahay dalka jaar ahna shiddo badan kasoo socoto.
Ninkii seexdaa siciis …..
Haduu guuleysto mucaaradkii mingiste oo kale ayaa bilaabanaya, hadii laga guuleystana dabargoyn baa dhacaysa, marka ma dhici kartaa in ninkani uusan u awood waayin ee uu doonayo taaktiko uu ku garaaco dalkiisa oodhan oo ul iyo matoobi uu ku hogaamiyo, haday taasi dhacdana inagana inagu darsado.
ninka maahmaahda qoray waxaa ugu darayaa xagga galbeedkana ( the wild west) waxaa lagu macneeyaa ‘ aggah awoowgiin la gub oo dab naar ah lagu shid.
Geelle Naanaab says:
Waagii aysan Kenya huwanin nadaamka goboleysiga ayuu madaxweynuhu lahaa awood iskudhan oo kamadambeys ah ee uu xukuumaddiisa waxa uu damco ku muquuniyo oo ciidamada qalabeysanna sida uu doono u adeegsado iyada oo aan wax hadal ah laga keeni karin.
Haatanse, nadaamka goboleysigu awooddaas iyada ah aad ayuu u kala furfuray oo debciyayna, waxaana dalka ka jirta mucaaradad xooggan oo waaxaha siyaasadda iyo saxaafaddaba kadhisan, taas oo awoodda madaxweyne qummaati baalasha uga riftay xaqiiqdii.
Nadaamkan goboleysigu waa midka aan qoraalkayga kore kusaleeyay oo uguna aaneeyay in uu abuuray oo quweeyay dareenka qowmiyadeysiga iyo qabiileysiga ee haatan Afrika oo dhan ku noqday dufaan aan la hakin karin. Sidaas aawadeeda, marna ha kayaabin in uu Uhuru qowmiyadaha iyo qabaa’ilka Kenya xataa kumideeyo talo uu waddan deris ah weerar milatari kuqaado – gaar ahaanna Soomaaliya, waayo Kenyaanku Soomaalida cabsi xooggan ayay sidoodaba ka qabaan.
Damac kasta oo uu madaxweyne Kenyaan ahi ka qabo hanti Soomaaliyi leedahay, waxaa jira duruufo iyo xaqiiqooyin dhab u jira ee aan abid usaamixi karin in uu calfado. Gobollada geyiga NFD qudhooda ayaysan dawlad Kenyaan ahi haddeer Soomaaliya usoodhaafi karin, inta wax kaleba la gaarin.
War li’daa maandhoow.
Waxaan filayaa inaad ku talin lahayd markii la yiri col baa soosocda, aynu u dhbacano mar haday na arkaan inaan dhbacan nahayu oo jiifno way iska noqonayaan.
Tan labaad rajada aad ka leedahay nin isba lahaysto oo dhulkiisu yahay ku talagalka sanadaha soo socda in la lugo fidsado ama kheyraadka ku jira loo aayo, ayaad sugaysaa inuu ku difaaco,, war ninyohow war li’idaa.
Tan kale militariga inkastoo loo sharci dayo marka meel loo isticmaalayo oo waliba inta lug la-isjabiyo ayaa kadibna la yiraahdaa waxaan goobaynaa nimankii waxyeelada noogaystay, kadibna dhulku waa nabadeey.! waxaa kaloo jira weerar iyo dhac dadban oonad lasocon oo meel kale lagaa weerarayo adna markii dhaxalkaaga la qaybsadao ayaa argagaxaysaa ood oiranaysaa war sidee wax u dheceen.
nimankan kaliyana ha eegin ee eeg dadka ka danbeeya oo inta iyaga rarta kadibna adiga kugu soo ganaya, maxaad samayn shaydaan kaa xoog badan kaana jeeb dheer markii laggugu sallado?
iska xayd xaydo sida ninkii Muuse Biixi oo ahaa ninka waalan oo gaadhiga baska ah ee dadku ka buuxaan la baxsaday kadibna buur dhaladeed lasii fuulaya isagoo 100 ku wada, war Muusoow na dhig, war muusoow dadka dhig, war aan kuu ducauyno muusoow ee na dhig, war ninka yaa naga qabta. keenya uga dacwood.
saaxiib qoraalkaagii xiisaha lahaa waan arkay kafdiba waa la waayay, maxay tahay sababtu wuxuuba ahaa qosol miiran
Saaxiib, aad baad iiga qoslisay runtii kkkk kkkkk! Weliba qisada aad Biixi kaga majaajilootay ayaa firixdii iga dhammeysay!
Walaal, waan kula fahmayaa heerka aad xaajadan ka duulinayso, gaar ahaanna in nacabka daaha dibaddiisa wax kasoo hud-hudinayaa kasii halissan yahay doqonka madow ee dabada lagasoo riixayo. Laakiin aan aniguna kuu faydo xaqiiqadoo ay qolodan Galbeedka ahi qummaati u dhaadan yihiin oo kuna laazimtay in ay qowmiyadaha Islaamnimada ku ad-adag ee aadkana u dagaalyahansan – sida Soomaalida – kula dhaqmaan falsafadda ah: “ha u abuurin qaddiyad wada mideysa ee ay kaaga soo wada horjeedsadaan”.
Waa ay garanayaan in qowmiyadaha noocan ahi mideeyo weerar dibedda lagaga sooqaaday ee loo arkayo gaalo kusoo duushay. Sidaas baddalkeeda, waxaa ay adeegsadaan falsafadda ah “kala xad oo sidaas ku xukum” – sida qaalibka ahna waa kadhex hurinta dagaal sokeeye ee ay dhexdooda iskugu jebiyaan.
Haddii Kenya weerar toos ah ee ay reer Galbeedku hurinayaan Soomaaliya kusooqaaddo, waxa ay gaaladu kadheefayso oo qudha waa Soomaalida ay waahore kala qoqobeen oo ay qummaati umideeyeen iyo weliba waddamado badan oo muslimiin ah oo awood culus leh oo iyana qaabkaas kumidooba – sida Turkiya iyo Carabta badankeeda.
Gaaladu aad ayay u taqaannaa cibaarada loo yaqaanno “domino effect” oo ay ogyihiin in ay sibiq kumideyn karaan Caalamka Islaamka ee ay siyaabo daahsoon ku kala faquuqeen. Iskusoo wada duudduub oo, Kenya iyo reer Galbeedku waahore ayay kala dhinteen oo indhawaaleba xiriirkoodu aad ayuu u xumaa.
Awlal iyo Sag-Saag.
Waxan mahad gaara u celinayaa web/ka Marqaannews oo Raalintii kaalin Mugleh ka qaatay farxad gelinta iyo Fursad siinta dadka La Faquuqay iyo Sheegatada, Runtii Farahooda ayay tirin lahaayeen labadan Awree Waqtigodi ku illaaway web/ka Marqaannews.
Hadda ka hor ayaan Arkay Geed Wayn oo ku yaalla laadcanood dusheeda kaasoo loo bixiyay Doqon ma waaye, inta badan lagama waayo mid Sacsac ah oo saxadu ka hallowday, Marqaannews so uma eka geedkii Dowon ma waaye, labadii isuma qaddo ee Qaawinada isku raacday kkkk kkk kkk
Awlal waa 17 Jir Sag-saag isagu waa 15.
Carruur weeye Raggaan
Caqligaan u bislaan
Coonnimay ku dhasheene
Casaanki ka idlaa
Timihii ku cirrayste
Waa ciyaal cago wayn
Weli beega camuudda
Anna waan carbiyaa
Casharraan u dhigaa
Hayeeshe laba caaq
Ninki caado yaqaan baa
Awlal baan ku casuumay
Ee haddu cod yaqaan
Car ha sheego Da’diisa.
28 sano ayuu Marqaannews qartaagnaa + 30 sano samayada la siin jiray, sunniyahaa u xirnaa, saawir ba la oran jiray,oo qolo sokeeyaa, suxllada ka jabin jiray, weli waa sidiisii. Isma doorin seedihi, sidiibayna loowyuhu,ugu saafan yihiino kkkk kkk kkk Sirbo dooro leeyahay kkkk kkkk kkkk kkkk kkk kkk kkkk kkk kkkkk kkkkk kkkk kkkk kkk
Ruuxa magaca “Kayse” dadka ku aflagaaddeynayow, markasta oo aan hawraartaada aadka u jilicsan daalacdo aad ayaan xaqiiqdii kaaga naxaa.
Bal hadda, jabaqdaas aad qoraalladaada ku malmalluuqdo ninka ragga ah ee arka, walluusan marna isyiraahdeen ruux nuday labnimo kujiro ayaa sooqoray! Marar badan ayaa waxaa igalay danniga ah in aad tahay naag nolosha ka dhacday oo magac rageed isku hoos qarinaysa marka waxa kasoo burqanaya la akhriyo.
Sida aad ogtahayba, anigu in aan noocaga laqasto aad ayaan iskalaweynahay xaqiiqdii, sidaas oo ay tahayna mararka qaar waxay igu kalliftaa in aan runta iyo xaqa kugu baraarujiyo maadaama aan ahay addoon muslim ah oo awaamirta lafaray in uu xaqa iyo runta sheego.
Wax aad tahayba, bal waxa aad kuhadaaqdo dib u daalaco oo adigu isla xisaabtan; haddii kale dad aad taqaanno oo akhyaar ah tus oo akhrista dheh bal sida ay kuugu layaabaan oo dhegaha kaaga raacaan maadaama aad adigu qaflad xun kujirto.
Runta iyo xaqa aan kugu dakhrayaa waxaa weeye in aynnu nahay addoomo Alle oo bina-aadam ah ee aan waxba ishdheereyn habayaraatee. Anigu waxaan ogahay in aan ninka Yaxarka ah, kan Tumaalka ah, kan Nigerianka ah, kan Turkaanada ah, kan “Jareerka” ah, kan, Ingiriiska ah, kan Carabka ah, kan Indhayarta ah, kan Hindiga ah, kan Amazonka ku nool iyo midkasta oo uu ahaadoba in aan lasimanahay oo aanan innaba waxba dheerayn.
Rasuulku (SCW) waanadiisu waxay ahayd: “KULLUKUM MIN AADAM, WA AADAM MIN TURAAB”. Aniga iyo ruux kasta oo bina-aadam ah iskumid ayaynu nahay, adiguse heerka ay cawaannimadu kula marayso waxaad isu aragtaa in aad aadmiga kale ka fadli badantahay oo kana nasabsantahay! Markasta oo aad Yaxar iyo Yibir igu tilmaanto, waxaad iska aaminsantahay in aad sixun ii caayday oo dhibaato badanna ii geysatay, laakiin anigu waan kugu qoslaa waayo waa dad ila siman oo marna aynu walaalo Soomaaliyeed islanahay marka kalena walaalo bina-aadam islanahay ee aanan waxba dheerayn xaasha-lillaah!
Bal adigu uun dib iskugu laabo oo isla xisaabtan maandhe/maandhey, sidatan si ma ahee.
@ Kayse, ogoow waa magacyo badan yahay qof isku kalsoon maa aha,isagaa isu camira,doofaarkaa Yar Engilsh xitaa Kuma uu hadlo,google translation ayuu isticmaalaa, erayadiisa ayaad ka garan kartaa.waa Doofaar Yar oo cuqdadaysan.
Waqti badan kuma lumiyo warday iyo gunta ogaden.
Magaca kuu saaran ayaa markhati nool kugu ah inaad tahay kuwii cawirnaa,
Ee caawanta ahaa, Cawrada qarsanayn.
Ina xagaa dheere Aabbahaagi Jilbaha muruxsanaa was.
Cuqubo waxaa kuugu filan cimrigaaga aad ka carartay kkkkkk kkkk 17jir
Sida loola caraatamo weli layma baran, cashar ii dhiman weeye, cilmi baaris dambe , balaan eego culuunta.
Weligaaba caaclee cunug baahan sidiisi kkkkkk kkkk kkkk kkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkk kkkk kkkkk kkkkk kkk kkkk kkkkk kkkkk
Naftan yaree “jubalander” sheegata waxaan ku leeyahay, dhammaan mareegtooyinka Soomaaliyeed iyo kuwa kale ee caalamkaba dadka ku fadhidirira midkoodna magaciisa saxda ah kuma soogalo, in aad nasakhantahayna waxaa caddayn buuxda u ah in aad qudhaadu sitado magac aan kaaga ahayn.
Adigii magac aan kaaga ahayn sheeganayay ayaa cid kale wax kasii sheegaya – bal heerka ay cawaannimadu kula marayso adigana (haddii aadanba qudhaadu ahayn daciifka “Kayse” ku caaytama). Maxaa kuu diiday in aad magacaaga rasmiga ah kusoo gasho oo wax iskaga dhiciso aan dullinimo iyo daciifnimo ahayn?
Labadiinnuba calaashaan maxaa Farmaajo loo dhaleeceeyaa ayaydin Mareexaan ahaan dadka ugu qamaamtaan, laakiin annagu cawaannimada idin lahadhay waynu ka ladannahay oo reerkaas dhan ee islaameed oo marna tolkayo ah aawadiinna ha ufadhiyina inaynu u aflgaaddeyno xaasha!
Waan ogahay in aad waahore sixun uga hinaastay Englishkayga heerka professornimo jooga oo aad xanuun dhimirka ah ka qaadday, waxaanse hubaa in akhyaarta qoraalladeenna daalacanaysa ay Af-Haneedkayga Afkeenna Hooyo ka qiyaasan karaan kaafka iyo kaladheerida aynu aniga iyo idinku ku kala joogno aqoonta goshiyeed ee luqadaha Soomaaliga iyo Englishka labadaba.
Kana nax oo nafta ku waa ee, waxaan kuugu bishaareynayaa in ay maalinkan maanta ah malafkayga aqooneed iigu xereysantahay shahaadada dunida uugu sarreysa ee barista luqadda Englishka ee ay bixiso Jaamacadda Cambridge University, toban sanona aan macallin English ah soo ahaa!
Halka aad iga laqaadday waynu isla ognahay oo waa Farmaajo iyo in aan Kismaanyo kaasii xigo oo xoogna kujoogo. Adeerradiinnii wareersanaa ee Barre Huuraale iyo Farmaajo Faaruq ayaydin ciilkoodii idin ku garooray naga la dul xayraameysaan, waxbase nagaga ma qaadaysaan wallee! Ama caaytama ama cataaba, idinka ayaa ku qasla’!
Annaguse wixiina idin lawalaaqan mayno oo waynu iskalaweynnahay oo kana nasabsannahay bil-xaqiiqa. Jabaqda iskasii wata.
Ku rid Jubbolander isku hayb ma tihiine kkkkk
Afsomali sifaysan, oo Saxarkii laga qaaday, ma saafa ma qalaa, waa su’aal kaligay , Jawaabteeda sugee, ilmo soore kuraac, iyo Sabarkii yaxareed baad, isku seedo tihiinoo, Adigiyo Sinjigaagu, soonaliba ma gashaan, surunkaa la cadaab, wuxuu saanyo xumaa, waana saafi lahaa, sarbeebtan u socdee, waxaan kaaga sarriigtay, inaadan saanyo badnayn, sabool yahay caqligaagu, sokeeyad u taqaan, midka saaran dushaada, isagoo ku sarbayn, surka kaaga istaagan, baad salaan u dirtaa, weligay ma saluugin, saantayda maqaarka, sinjigaygu mid weeye, ma salguuro abkaygu, sowdkayga Nin liido, ma saacido haraggiisa,
Haddaad saarka tuntaa, Ama aad subcisoo, saablayda taqaan, kkkkk nin raga ah ma sadroo, isma saaro amaane, waxa kaa suhaaayo, ma suuddii horoglaa kkkkk kkkk kkkk kkkkk kkkkk kkkk kkkk kkk kkkkk
Casharkaas ka soo bax, waan ku saamaxayaaye.
meeshu qoraalku ma diidnmaa?